Amagama omlilo omfuziselo, umdlalo wesithathu weNintendo kwiVenkile yeApp ye-iOS | IPhone iindaba
Amagama omlilo omfuziselo, umdlalo wesithathu weNintendo kwiVenkile yeApp ye-iOS
Emva "kokusilela" kokubonakala kokuqala kweSuper Mario kwiVenkile yeApple ye-iOS, uNintendo ngoku ubheja kumdlalo weklasikhi ngakumbi onomxholo wokudlala indima. Ngeli xesha ekugqibeleni sinayo Fire Umfuziselo Heroes, ixesha lokuzonwabisa kule RPG yeqhinga onokuyonwabela simahla, ngeentlawulo ezihlanganisiweyo, kungenze njani ukuba kungenjalo. Elinye ilinge likaNintendo lokufumana ii-chestnuts ngaphandle komlilo kwitekhnoloji yeselfowuni yokuma komhlaba, kwiiveki nje ezimbalwa emva kokuba ingxubevange phakathi kweelaptop kunye ne-desktop (iNintendo switch) ihlasela ngokusemthethweni imarike. Makhe sijonge Amaqhawe omlilo ukusuka kwiNintendo.
Masiqale kuqala ngempama esihlahleni seSuper Mario Run, eneneni ukhuphelo lwalunoburhalarhume, nangona kunjalo, imodeli yeshishini kunye ne- € 10 yomdlalo weselfowuni khange igqibezele ngokugqibeleleyo kuluntu. Iziphumo zazicacile, zimbalwa iintengiso, ngaphandle kokukhutshelwa okuninzi. Ewe umdlalo wawungakhange ubenomtsalane njengoko sasifuna.
Siyaqhubeka ke Umfuziselo umlilo Amaqhawe, umdlalo omtsha weNintendo oza kwiVenkile yeApp ye-iOS ngohlobo lwe-RPG, kufuneka sikuphephe ukuba phantsi kobukhosi be-Embla kwaye silwe ngamandla ethu onke. Le saga yexesha elide yokudlala indima esekwe kwindima iya kusigcina siphaphile, iqhinga esilikhethayo linokuthatha isigqibo. Ke ngoko, ngokungathandabuzekiyo uya kuba nenani elilungileyo labalandeli abaya kukhawuleza ukuzikhuphela.
Nangona kunjalo, kwakhona kubonakala ngathi iNintendo ayijolisanga kwinto ekufanele ukuba yenzeke, imidlalo eqhelekileyo ixhaphake kakhulu kwizixhobo eziphathwayo. UNintendo uyazi kakuhle indlela yokuphuhlisa ezi ntlobo zemidlalo kwaye usale. Asiyi kuthetha loo nto Fire Umfuziselo Heroes Ayisiwo umdlalo obalaseleyo, ngakumbi ukuba ukhe wazama okuncinci kuwo, kodwa okucacileyo kukuba ayizukuba yimpumelelo esiyifunayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » Amagama omlilo omfuziselo, umdlalo wesithathu weNintendo kwiVenkile yeApp ye-iOS
I-YouTube idibanisa ngakumbi nangcono ngeChromecast nge-iPhone
I-Radio AIR yinkqubo yasimahla esivumela ukuba simamele kwizikhululo zikanomathotholo ezingaphezu kwama-6.000 kwihlabathi liphela